स्वयम्भुमा दिन भरी जे जे देखियो जस्ताको त्यस्तै बाँदर देखी मान्छे सम्म हेर्नुस् । – Complete Nepali News Portal
स्वयम्भुमा दिन भरी जे जे देखियो जस्ताको त्यस्तै बाँदर देखी मान्छे सम्म हेर्नुस् ।
April 21, 2017	58,810 Views Share
डिभी परेर अमेरिका जादै : भविष्यबाणी सत्य भयो : सबिता माता भिडियो
यस्तो रहेछ नेपालबाट २३ मिनेटमै अमेरिका पुग्न सकिने सुपर प्लेनको निर्माण (भिडियो)
हेर्नुहोस अनि आफन्त हरुलाई शेयर गर्नु होला नि ? पछुतो होला नि ?
हजुरले भनेका कुरा मेरो जीवनमा मेल खायो : रोमा न्यौपाने
माता सबिताको गितले आज संसार रुवायो… . भिडियो
नेपाल मात्र तेस्तो देश हो माता जी जँहा मन्दीर हरु धेरै छन्….